उपत्यकामा २ सय २४ जना सहित ७ सय ४३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण - राष्ट्रखबर-Nepal's Popular Digital Newspaper
समाचार उपत्यकामा २ सय २४ जना सहित ७ सय ४३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण
सोमबार काठमाडौं उपत्यकामा २ सय २४ जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन् । काठमाडौंमा १ सय ७७, ललितपुरमा ३३ र भक्तपुरमा १४ जना सङ्क्रमित थपिएका हुन् । योसँगै उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३ हजार ४ सय ८६ पुगेको छ । यस्तै सोमबार देशभर ७ सय ४३ जनामा कोरोना सङ्क्रमित भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा २ सय ४६ महिला र ४ सय ९७ पुरुष रहेका छन् । योसहित नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या ३२ हजार ७ सय ६८ पुगेको छ ।
यस्तै सोमबार इलाममा १, उदयपुरमा १, ओखलढुङगामा ३, खोटाङमा ४, झापामा ५, धनकुटामा २, मोरङका ३१, संखुवासभामा २, सुनसरीमा २३, धनुषमा ५, पर्सामा ३४, बारामा ९४, रौतहटमा ५, सप्तरीमा १५, सर्लाहीमा , सिरहामा १०, काभ्रेमा ५, चितवनमा ३२, दोलखामा १, धादिङमा २, मकवानपुरमा १, रामेछापमा २, सिन्धुपाल्चोकमा ५, कास्कीमा २, गोर्खामा १, तनहुँमा ३, नवलपरासीमा १०, म्याग्दीमा १, बागलुङमा २, स्याङजामा १, अर्घाखाँचीमा १, कपिलवस्तुमा ९, गुल्मीमा ४, पाल्पामा २, वर्दियामा १, बाँकेमा , रुपन्देहीमा ६, रोल्पामा २, कालिकोटमा ३, जाजरकोटमा १९, रुकुममा १, सुर्खेतमा ११, कञ्चनपुरका १९, कैलालीमा ७९, डढेलधुरामा ४, दार्चुलामा १, बाजुरामा १ तथा बैतडीमा ३ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
यसैगरी सोमबार आठ जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ । योसँगै नेपालमा मृत्यु हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्या १५७ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ ।
सोमबार देशभरका विभिन्न अस्पतालबाट १ सय ७५ जना डिस्चार्ज भएका छन् । योसँगै हालसम्म १८ हजार ८ सय ६ जना कोरोना सङ्क्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् । सोमबारसम्म देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या १३ हजार ७ सय १५ रहेको छ । त्यस्तै देशभरका ३९ प्रयोगशालाबाट १० हजार २ सय ३४ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । योसँगै हालसम्म जम्मा ६ लाख १० हजार ४ सय ६९ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको प्रवक्ता डा. गौतमले सोमबारको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै देशभरका संस्थागत आइसोलेसन ९ हजार १ सय ५४ जना र होम आइसोलेसनमा ४ हजार ५ सय ६१ रहेका छन् । सोमबारसम्म देशभर ११ हजार २ सय ७५ जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने बागमती प्रदेशमा १० जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् ।
अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा भदौ १५ गतेसम्म बन्द गर्ने फोरमको निर्णय
चालक अनुमतिपत्र छपाइ सकियो वितरण अनिश्चित